Pasipaoro faharoa - Orinasa misimisy momba ny fifindra-monina miaraka amin'ny CEO Yury Mosha
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Pasipaoro faharoa - Orinasa misimisy momba ny fifindra-monina miaraka amin'ny CEO Yury Mosha
Eo amin'ny tsenan'ny fifindra-monina, indrindra any amin'ny faritany post-soviet any amin'ny firenena toa an'i Russia, Ukraine, ary Belarus, ny Passport faharoa dia heverina ho mpitarika indostrialy. Ny orinasa iraisam-pirenena dia nivoaka ambony tamin'ny sehatra misy azy ary tsy ho ela dia hankalaza ny faha-10 taona nijoroany tao amin'ny indostria tamin'ny martsa 2021.
I Yury Mosha no nanorina ilay orinasa, izay mpifindra monina ny tenany. Nifindra tany Amerika irery izy, ary tsy nanana namana na fifandraisana zero. Raha vantany vao tonga teto izy dia nanomboka ny orinasany manokana, Russia America, izay tsy niara-niasa afa-tsy tamin'ireo mpifindra monina Rosiana izay te-ho tonga tany Etazonia Ny orinasa kely sy monina any Sheepshead Bay any Brooklyn. Tsy misy fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola sy amin'ny asa rehetra vitany irery, tamin'ny taona 2017, novan'izy ireo ny anarana hoe Passport faharoa. Rehefa nahazo fahalalana indostrialy sy nanana fahatakarana matanjaka momba ny maodelin'ny orinasany izy ireo dia nanitatra ny tsenany mba hiara-miasa amin'ireo firenena hafa. Ankehitriny izy ireo dia manampy ny mpanjifany hifindra monina any amin'ny firenena 80 mahery manerana an'izao tontolo izao.
Manolotra serivisy isan-karazany ho an'ny mpanjifany izy ireo, ny iray amin'izany dia ny fampifanarahana ara-tsosialy. Rehefa tonga any amin'ny firenena vaovao dia ilaina ny fahazoana fanampiana ara-dalàna, na izany aza misy pitsopitsony hafa ilain'ny mpitsoa-ponenana fanampiana. Misy olona mila mihaona amin'izy ireo eny amin'ny seranam-piaramanidina, manampy azy ireo hahita toerana honenana, mahita azy ireo fiantohana ara-pahasalamana, milaza amin'izy ireo hoe aiza no azon'izy ireo atao taranja fiteny, ary aiza no hividianana fivarotana enta-madinika. Ilaina ireto pitsopitsony ireto ary ny Passport faharoa dia manampy amin'ny mpanjifany any amin'ny firenena rehetra iarahany miasa toa an'i Aostralia, UK, Denmark, Egypt, India, Singapore, Uruguay, Japan, ary ny hafa. Raha mila manontany ny mpanjifa amin'ny resaka fifindra-monina izy ireo, ny Second Passport dia manana adaptatera izay azon'izy ireo antsoina foana hoe iza no manampy. Amin'izany no hialana amin'ny tahotra miaraka amin'ny fifindrana amina firenena vaovao.
Serivisy iray hafa aroson'izy ireo dia manampy ny mpanjifany hahazo visa. Manolotra fanampiana amin'ny fahazoana visa asa sy visa ho an'ny mpianatra izy ireo, ary visa maro karazana. Miaraka amin'ny visa azon'izy ireo dia mandeha lavitra mihitsy izy ireo hanampiana ny mpanjifany oniversite ao amin'ny firenena izay andehanany, ary hanampy azy ireo hahita programa hanatontosana ny mari-pahaizana. Ny pasipaoro faharoa dia afaka manampy ny mpanjifany hahita asa amin'ny firenena vaovao, ary alao antoka fa misy izy ireo. Izy ireo dia manana ny fahazoan-dàlana ilaina rehetra hanaovana io asa io, ary izy ireo koa dia ao anatin'ny filankevitry ny fifindra-monina.
Zavatra iray izay heverin'izy ireo ho zava-dehibe tokoa ny lazany. Ilaina ny fahafaham-po ny mpanjifa, ary mirehareha amin'ny famoronana fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny olona iarahany miasa izy ireo. Nahazo famerenana horonantsary maherin'ny 300 avy amin'ny mpanjifa afa-po izay miresaka momba ny fanampiana lehibe azon'ilay orinasa tamin'izy ireo. Izy ireo koa dia manana famerenana an-tsoratra mihoatra ny 1,000 ary avy amin'ny mpanjifa ihany koa, amin'ny antsipiriany ny fotoana nomen'ny Passport faharoa azy ireo tao anatin'ny 10 taona izay nisokafan'izy ireo ho an'ny orinasa.
Na dia manana ny birao foiben'izy ireo any New York City ao amin'ny Wall Street aza izy ireo dia miasa mafy amin'ny fanitarana ny franchise. Amin'izao fotoana izao dia manana birao 50 mahery izy ireo ahafahan'ny mpanjifa mitsidika sy misy olona manampy azy ireo amin'ny ekipa pasipaoro faharoa. Ao amin'ny 2021, mikasa ny hanokatra birao 50 hafa izy ireo mba hanana birao 100 mahery. Mba hanaovana izany dia mitady mpiara-miasa aminy ihany koa izy ireo.
Ny iraka ataon'ny orinasa dia ny "Ampio ny mpanjifa rehetra, na inona na inona zom-pireneny sy toerana onenany, handresy ny sisin-tany amin'ny lalana hahatratrarana ny tanjon'izy ireo, sady manome antoka ny matihanina fa tsy misy orinasa hafa afaka manome". Ny ekipa miasa ho an'ny pasipaoro faharoa dia tena akaiky, ary tena manome lanja ny asa izay ataony izy ireo. Mirehareha ny orinasa amin'ny fahafahany mamela ny olona hanana vintana faharoa amin'ny fiainana, hifindra any amin'ny firenena vaovao ary hanomboka indray.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny orinasa sy ny serivisy arosony dia tsidiho ny azy ireo tranonkala.